CRL-,०, 40,941 40,941१ मूल्य, बिक्री - CRL-XNUMX आपूर्तिकर्ता मेडिसीरावाटेरियल डट कममा किन्नुहोस्।
रासायनिक नाम:२- [बीस (--फ्लोरोफेनिल) मिथाइल] सल्फिनीलेथेनहाइड्रोक्सिमिक एसिड
कैस कुनै .: 90212-80-9
आणविक सूत्र: C15H13F2NO3S
१.Can जागा रहनुहोस्।
२. अल्जाइमरहरूको उपचार।
.C.केन वृद्ध बिरामीहरूमा अत्यधिक निद्रा र लापरवाही हटाउन।
CRL-40,941 CAS 90212-80-9 को बारेमा विवरण
CRL-40,941 एक नयाँ अनुसन्धान रसायन निकट Adrafinil र modafinil सम्बन्धित छ।
CRL-,०, wake .१ एक जागृति-प्रमोट गर्ने एजेन्ट हो जुन नजिकै एड्राफिनिलसँग सम्बन्धित छ। यो जनावरहरूमा एन्टिग्रेसिभ प्रभाव उत्पन्न गर्न फेला पर्‍यो, जुन एड्राफिनिलले उत्पादन गर्दैन।
CRL-40,941 औषधि, स्वास्थ्य उत्पादन, खाद्य, पेय पदार्थ, प्रसाधन सामग्री, जैविक र रासायनिक अभिकर्मक र अन्य उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
आजकल, पूरक पूरक निर्माताहरूले उनीहरूको सूत्रमा यसलाई थप्छन् र प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई वास्तवमै सराहना गर्छन्।
कृपया कुनै पनि समयमा यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ CRL-40,941.
यदि तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ भने CRL-40,941 मूल्य, कृपया हाम्रो ग्राहक सेवा हॉटलाइन +86 592 5365887 XNUMX XNUMX XNUMX मा कल गर्नुहोस् वा ईमेल पठाउनुहोस् [ईमेल सुरक्षित].